Kunyangwe mitengo ichiramba ichidonha pakubata uye bandwidth, zvinogona kuramba zvichidhura kuitisa webhusaiti pane yepamberi yekutambira chikuva. Uye kana usiri kubhadhara yakawanda, mikana ndeyekuti yako saiti iri kunonoka - kurasikirwa neyako yakawanda huwandu hwebhizinesi. Sezvo iwe uchifunga nezve maseva ako anotambira yako saiti, ivo vanofanirwa kutsungirira nezvakawanda zvikumbiro. Zvimwe zvezvikumbiro izvi zvinogona kuda kuti server yako itaurirane nedzimwe
Chipiri, January 26, 2021 Chitatu, Nyamavhuvhu 25, 2021 Douglas Karr
Maitiro Ekutanga iyo WordPress Saiti iyo Yakagadzirirwa Kutsvaga
Mugovera, Kukadzi 2, 2019 Chitatu, Kukadzi 6, 2019 Douglas Karr
Sezvo WordPress iri kuenderera mberi nekutora misika yebhizimusi, isu tinoramba tichiwana zvimwe zvikumbiro zvakawanda kubva kumabhizimusi makuru ane nzvimbo dzakanaka dzakagadzirwa nekushambadzira kunoshamisa uye makambani ekugadzira - asi achishaya optimization inodiwa kukanganisa mhedzisiro yavo yekutsvaga. Tisati tamboshanda pamazano ezvekutenga evatengi vedu, isu tinotanga nekuvabatsira nekugadzirisa. Iko hakuna kuzhinji kwekushandisa kwekudyara mune zvemukati zvemukati kana yako saiti ikasawanikwa!